हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल
सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२ मा प्रकाशित !
३० फागुन सोलुखुम्बु। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत अन्य हिमाली मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको आगमन दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको हो । फागुनबाट सुरु भएर जेठको मध्यसम्म चल्ने यो सिजनका लागि चहलपहल सुरु भएको नाम्चेका व्यवसायी दोर्जी शेर्पाले बताए ।
हिमाल चढ्ने मौसमको रुपमा चिनिने यो मौसमका लागि आइसफल डाक्टर बाटो बनाउन सगरमाथा आधार शिविरमा पुगिसकेका छन भने आरोही पनि आउने क्रम सुरु भएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा एकदेखि दुई महिना बिताएर वातावारणसँग स्वास्थ्यको अनुकूल मिलाउनुपर्ने भएकाले एक÷दुई महिनाअघि नै आरोही आउने क्रम सुरु हुने गरेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
ट्रेकिङ मौसम सुरु भएसँगै जिल्लाका विभिन्न भागका पर्यटन व्यवसायी लुक्ला पुगेका छन । केही दिनअघि मौसममा खराबी आएको भए पनि पुनः मौसममा सुधार आएकाले व्यवसायी खुसी भएका छन । पर्यटन टोली आउने भएपछि खुम्बु हिडेका सोलुखुम्बु वाकुका सुमन मगरले समयमा नै पर्यटक आउन थालेको बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: केन्या अल आउट, १५६ रनको लक्ष्य नेपाललाई
NEXT POST Next post: केन्यामाथि नेपालको ७ विकेटको जीत
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:३२